Waan Is Jecel nahay haddana ma is fahano!!! By Hassan Ibrahim
Tuesday, 08 May 2018 02:10
Marka laga hadlayo Arrimaha Jacaylka aad ayay u fara badan yihiin Mowduucyadooda kala duwan waana bad-weyn Muujaduhuna ay hadba heer gaaraan taasoo sababi karta in qofka Bad-weyntaasi bartanka kaga dhacaa inuu ku hafto biyahaasi iyo Hirarka waa weyn.
Haddaba haddii aan u soo daadago Nuxurka Qormadan aan maanta kaga hadlayo Lamaanayaasha Is jecel ee haddana aan Is fahmin ayaa ah mid ay soo badanayaan maalinba maalinta ka dambeysa cabashooyinkoodana ay isoo gaarayaan.
Is Fahamka marka laga hadlayo waa mid qaali u ah labada Lamaane ee jacayl wadaaga ah inay noqdaan kuwo mar waliba is fahamkoodu uu wanaagsan yahay, laakiin haddii taa la waayo waxaa imaanaya in uu sii socon waayo Jacaylkaasi, Gacalisadaada/Gacaliyahaaga isku day in aad noqotaan laba ruux oo mar waliba is fahamkoodu uu sareeyo.
Haa way dhici kartaa in labada lamaane waxoogaa mad madow ah uu soo kala dhex galo sabab kasta iyo qaab kasta haku yimaadee laakiin waa in aad xalkeeda raadisaan si meesha looga saaro Is faham waaga labada dhinac ka jira…..Ogow haddii Is faham waagaas labada dhinac ka jira aadan xal looga gudbi karo u helin in halkaas uu ku burburayo jacaylkiina oo aanu noqon doonin mid waara oo laga gun gaaro Aakhirkiisa dambena fashil ku dhammaada.
”Waan Is jecel nahay haddana ma is fahamno” ayay igu tiri gabar ka mid ah Akhristayaasha Shabakadda ilatali.com oo aalada Internetka igala soo xiriirtay waxay ii sheegtay inay is jecel yihiin wiil ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed, jacaylkaas haddana aanu ahayn mid ay isku fahmaan mar walibana uu badan yahay isku dhacooda iyo isla jaan qaadida ka miro dhalinta jacaylka baaxada leh oo ay isku qabaan.
Aniga oo ah Qoraha Qormadani Bile Maxamed Cabdi (Bile Baastey) waxay ila tahay in haddii labada Lamaane Jacayl run ah uu ka dhaxeeyo is faham la’aan inaysan jireyn, laakiin haddii jacaylkoodu uu ahaa mid dhalanteed ah uu imaanayo Is faham waa, marka waa in aad isku daydaa jacaylkaaga inuu noqdaa mid dhab ah si mar waliba is fahamkiinu uu u noqdaa mid wanaagsan aakhirkiina ka mira dhalisaan Xiriirkiinii hore ee ku bilowday jacaylka.
Ugu Danbeyntii waxaan leeyahay Lamaanayaashu haddii uu dhex maro jacayl dhab ah ha soo gabagabeeyeen ka mira dhalintiisa, waayo waxaa iman kara wax la yiraahdo xiiso dhac, Wahsi, In la is naco waana calaamado uu u meerinayo isku diraalaha diidan jacaylka ka dhaxeeya labadaasi lamaane ee mudada dheer qaadanaya Kaftanka, Baashaalka iyo Kifaaxa waqtiyada haasaawahooda isla qaadanaya Farxadaas.
Si kastaba ha ahaatee, in kastoo ay jiraan dad badan oo aaminsan in sanadahan dambe aanu jirin JACAYL balse uu noqday Jacaylkii mid ay ka sareyso Lacagta, haddana waxaa leeyahay jacaylku waa uu jiraa wali waa halkiisa Bulshadeena ayaana muunad xumeynaya gaar ahaan, Dumarka Soomaaliyeed oo inta badan lagu dhaliilo inay jacaylka ka doorbidaan lacag waxaan kula talin lahaa inay iska daayaan wax yaabahaas waaba haddii ay jiraan.
W/Diyaariyey: Hassan Ibrahim
More in this category: « Xog Cusub: Ma Agaasime Guud Mise isku Eekaysiin Wasiir Xaashi iyo Xirsigii Chief of Cabinet-ka MADAXWEYNE “SALDHIGA MILITARIGA EMATAARKU WUXUU S/LAND LUGAHA U GALIN KARAA XURGUFTA BIYAHA NIILKA IYO »